किन निदाउँछन् हातखुट्टा ? – Khabar Silo
किन निदाउँछन् हातखुट्टा ?
एजेन्सी । मानिसहरु यस्तो हुनमा धेरै समय एकै ठाँउमा बसेकाले वा पर्याप्त मात्रामा रक्तसञ्चार नभएका कारण खुट्टा निदाउने सोच्छन् तर एक अनुसन्धानले फरक कुरा पत्ता लगाएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, खुट्टा नसाका कारण निदाउने गर्दछ । यो शरिरमा हुने साना तारजस्तै नसा र उक्त नसाले दिमाग र शरीरका हिस्साबीच सन्देश ल्याउने लैजाने काम गर्छन् । लामो समयसम्म खुट्टामा बल पारेर बस्दा उक्त नसामा दबाब पर्छ र यो दबाब शरिरका अन्य भागमा पनि फैलिएर खुट्टाले सहजै काम नगर्दा खुट्टा निदाएको अनुभूति हुन्छ ।
कुनै कुनै बेला हात तथा खुट्टामा यस्ता समस्या आउने अनुसन्धानकर्ताले बताए । शरिरका कुनै अंगमा दबाब पर्दा त्यो अंग निदाउँछ । ती नसाहरु कोशीय फाइबरबाट बन्छ र प्रत्येक एक कोशीय फाइबरले अलग अलग संवेदनालाई मस्तिष्कसम्म पुर्याउने काम गर्छ ।
त्यस्ता फाइबरको मोटाई पनि सानो या ठूलो जस्तासुकै अवस्थामा पनि हुनसक्छ । यसको मुख्य कारण माइलिन नामक सेतो पदार्थबाट बनाइएको एउटा झिल्लीजस्तो बस्तु हो । यसमा दबाब पर्दा नसाले मस्तिष्कसम्म आवश्यक मात्रामा अक्सिजन प्रवाह गर्न र रक्तसञ्चार गर्न नसक्दा त्यस ठाउँमा संवेदना महसुस हुदैन र उक्त अंग निदाउने गर्दछ ।
तर लामो समयसम्म भने यसको प्रभाव रहिरहदैन । मानिस विस्तारै हिड्दा वा उक्त अंग डुलाउँदा केही समयपछि खुट्टा निदाएको अनुभूति हुदैन । पछि उक्त अंगमा दबाब हट्दा पुनः रगत या अक्सिजन सन्चार नियमित हुन्छ र अंग पुनः सञ्चालनमा आउँदा उक्त अंग फेरी संवेदनशील हुन्छ । यसरी हात या खुट्टा निदाउँदा शरीरमा कुनै किसिमको असर त पर्दैन तर केही समयसम्मका लागि छुट्टै खालको अनुभूति भने हुने गर्दछ ।
वनजंगलमा सजिलै पाइने, बनाउन सजिलो हुने र खादा स्वादिलो हुने निगुरोको यस्ता छन् फाइदै फाईदा
Posted on May 22, 2021 May 22, 2021 Author khabar silo
वनजंगलमा सजिलै पाइने, निगुरो । बनाउन सजिलो हुने, निगुरो । खादा स्वादिलो हुने निगुरो । स्वास्थ्यका लागि पोषिलो निगुरो । पूर्ण अर्ग्यानिक सब्जी, निगुरो । कति गुणी निगुरो ?हुन त अहिले सहरी क्षेत्रको करेसाबारीमा निगुरो रोप्ने चलन छ। यद्यपि यो वनजंगलमा सजिलै पाइन्छ । खासगरी बर्खायाम सुरु भएसँगै निगुरो खोज्ने, टिप्ने गरिन्छ । गाउँघरमा त […]
के तपाइको पैताला भ’तभती पोल्छ, यी रोगका लक्षण हुन सक्छ ! थाहा पाइराखौ !
काठमान्डौ : गर्मी बढेसँगै कोहीकोहीलाई पैतला भतभत पोल्ने समस्याले सताउँछ। धेरैले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। आफैँ निको हुन्छ भनी ठान्छन् ।तर, यस्तो स’मस्या भएमा लापरबाही गर्नु हुँदैन।\_यसले शरीरका बाँकी भागमा पनि समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यस्ता छन् पैतला पोल्नुका कारण:शरीरमा भिटामिन ‘बी’, फोलिक एसिड वा क्याल्सियमको कमी हुँदा पैतला पोल्ने समस्या देखिन्छ।उच्च रक्तचाप भएकालाई पनि […]
यी हुन् भुँडी घटाउने अचूक उपाय
काठमाडौंः प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त घरमा आमाबाबा छोरो या छोरी मोटाए भनेर खुशि हुँदाहुन् तर यसले बिभिन्न प्रकारका रोगलाई समेत निम्तो दिन्छ । त्यसैले पेट घटाउन धेरै मानिसहरु लागिपर्न […]
कस्तो छ बलिउडका जेठानी देवरानीको सम्बन्ध ?
आजको राशिफल वि.सं.२०७६ साल असोज १३ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३० तारिख